SAGAAL Ciyaartoy Oo Chelsea Ah Oo Lagu Xaaqay Stamford Bridge Iyadoo Kooxda Conte Ay Guuldarro Ku Bilaabatay Difaacashada Horyaalka Premier League - Laacib.net
SAGAAL Ciyaartoy Oo Chelsea Ah Oo Lagu Xaaqay Stamford Bridge Iyadoo Kooxda Conte Ay Guuldarro Ku Bilaabatay Difaacashada Horyaalka Premier League
Sagaal ciyaartoy oo Chelsea ah ayaa lagu xaaqay garoonkooda Stamford Bridge ka dib markii ay guuldarro 3-2 ka soo gaartay kooxda Burnley kulankooda ugu horeeya xilli ciyaareedka. Gary Cahill ayaa bilowgii ciyaarta casaan toos ah laga siiyay, iyadoo Cesc Fabregas uu isna casaan kale qaatay ciyaarta oo 10 daqiiqo ay ka harsan tahay. Inkastoo Blues laga badiyay hadana Alvaro Morata ayaa furtay akoonkiisa goolasha Premier League isagoo dhaliyay goolkii koowaad ee Chelsea.
Tababare Conte ayaa doonayay inuu ka fogaado sidii uu Mourinho ku bilowday xilli ciyaareedkii 2015-16, laakiin jamaahiirta Stamford Bridge ayay u aheyd filim ay hore u soo daawadeen oo kale, 24 sannadood ayaana laga joogaa markii ugu horeysay ee ay kulankooda furitaanka xilli ciyaareedka looga badiyo gurigooda.
Tababare Antonio Conte ayaa ciyaartaan ku soo bilaabay 20 jirka khadka dhexe Jeremie Bago isagoo ka doortay inuu shaxdiisa ku soo bilaabo weeraryahan Alvaro Morata, waxaana da’ yarka Ivory Coast uu dhanka weerarka ka garab ciyaarayay Willian iyo Batshuayi. Antonio Rudiger ayaa isna lagu soo bilaabay kulankiisii ugu horeysay ee Premier League.
Chelsea ayaa ciyaarta ku bilaabatay si fiican iyadoo Fabregas iyo Willian ay kubado fiican dhisayeen, laakiin kooxda difaacaneysa horyaalka ayaa waxaa u soo hooyatay musiibo markii kabtankooda Gary Cahill casaan toos ah loo taagay ka dib qalad uu ku galay Craig Pawson.
Waxaana casaanka uu sidoo kale musiibo u noqday da’ yarka Jeremie Bago kaasoo la bedelay kulankiisii ugu horeysay, waxaana bedelay Christensen oo ku biiray seddexda daafac danbe.
Daqiiqadii 20aad kooxda Burnley ayaa u muuqatay mid kubada shabaqa dhex dhigtay markii karoos uu soo dhigay Brady uu madax ku sii dhigay Tarkowski, iyadoo Voker uu madax shabaqa ku dhex dhigay, laakiin garsooraha ayaa diiday goolkaas madaama uu Tarkowski uu gacanta wajiga uga dhuftay Christensen.
DAQIIQADII 24aad – GOOOOL! Burnley ayaa si rasmi ah shabaqa u soo taabatay markii Matt Lawton uu karoos ka soo dhigay garabka midig, waxaana shabaqa ku laabay weeraryahan Voker iyadoo Courtois uu awoodi waayay inuu celiyo kubada. Vokes ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda Burnley ee shabaqa soo taabtay afar kulan oo isku xiga oo Premier League ah.
Inkastoo ay Chelsea ku ciyaareysay 10 ciyaartoy hadana waxa ay kubada ka heysteen kooxda Burnley iyagoo doonayay inay durbadiiba barbareeyaan ciyaarta, laakiin weerarkoodii joogtada ahaa waxaa dhuunta u galay daafaca Tarkowski kaasoo diiday inay natiijo yeelato kubad-heysashada Blues.
DAQIIQADII 39aad – GOOOOL! Inkastoo ay u muuqatay in Chelsea ay ku dhow dahay goolka barbaraha, Burnley ayaa heshay goolkeedii labaad ee ciyaarta, Ward ayaa kubada ka soo qaaday garabka bidix waxa uu u dhiibtay Cork oo isna kubada u celiyay Ward oo xabadka ku dejistay islamarkaana kubad gantaal ah ku nasasiiyay shabaqa uu waardiyaha ka ahaa goolhaye Courtois. Waxa uu ahaa gool si qurux badan looga soo shaqeeyay.
DAQIIQADII 43aad- GOOOL! – Afar daqiiqo ayaa ka soo wareegtay markii ay Burnley heshay goolkeedii seddexaad ee ay kaga yaabsadeen jamaahiirta Chelsea. Defour ayaa karoos macaan ka soo dhigay garabka midig, waxaana madax la helay weeraryahan Vokes oo kubada dabamariyay goolhaye Courtois, laakiin waxaa cajiib aheyd in weeraryahanka uu si sahlan uu u dhexgalay Luiz iyo Alonso.
Qeybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku soo dhamaatay iyadoo taageerayaasha Stamford Bridge ay ku oorinayaan garsoore Craig Pawson waxaana ay ka careysnaayeen go’aankii uu casaanka tooska ah ku siiyay Gary Cahill. Waa markii ugu horeysay waayaha Premier League oo Chelsea seddex gool lagu hogaamiyo qeybta hore ee kulan Premier League ah oo ay ku ciyaarayaan Stamford Bridge.
Qeybtii labaad ee ciyaarta Chelsea oo carcar ka muuqato ayaa bilowday weerar isdaba joog ah, waxaana ay daqiiqadii 51aad ay ku dhawaadeen inay shabaqa soo taabtaan, goolhaye Heaton ayaa faraha fooda ku bixiyay kubad gantaal meel dheer uu ka soo tuuray Marcos Alonso.
Alvaro Morata ayaa bedel lagu soo geliyay ciyaarta oo 30 daqiiqo ka harsan isagoo saftay kulankiisii ugu horeysay ee Premier League, laakiin Chelsea ayaa mar kale u dhawaatay inay shabaqa soo taabato, waxaana mar kale sigay kooxda Burnely Marcos Alonso.
Xiddiga reer Spain ayaa kubad laad xor ah loo dhigay, waxaana uu u qaaday si fiican oo gool loo fishay laakiin goolhaye Heaton ayaa si fantastik ah u badbaadiyay isagoo feer ku bixiyay kubada.
DAQIIQADII 69aad GOOOL! Lambar 9ka cusub ee Chelsea Alvaro Morata oo ciyaarta bedel ku soo galay ayaa kulankiisii ugu horeysay gool ku furtay, ka dib markii uu karoos fiican ka helay Willian oo garab midig ka soo qaatay, xiddiga reer Spain ayaa isagoo duulaya madax ku dhaliyay kubada ciyaartana ka dhigay 3-1.
Morata oo wax ka bedelay weerarka Chelsea ayaa ahaa mid carcar leh, isagoo daqiiqadii 73aad shabaqa soo taabtay mar kale laakiin markaan goolkiisa waa la diiday madaama uu garab dhaaf sameeyay.
Chelsea ayay xaalada ku sii xumaatay daqiiqadii 81aad markii Cesc Fabregas casaan laga siiyay, iyagoo ku soo haray kaliya sagaal ciyaartoy. Fabregas ayaa jaale labaad ku qaatay markii uu qalad ku galay Cork. Ka dib markii uu garsooraha casaanka siiyay Fabregas, jamaahiirta Chelsea ee Stamford Bridge ayaa bilaabay inay ku heesaan “Garsoora ayaa 3-1 nagu hogaaminaya”.
DAQIIQADII 88aad GOOOL! David Luiz ayaa nafta ku soo celiyay Chelsea markii uu dhaliyay goolka labaad. Azpilicueta ayaa kubad soo qaaday waxaa madaxa ku taabtay Morata, iyadoo kubada uu helay David Luiz oo shabaqa si habsami leh u geliyay. Waxaana uu ciyaarta ka dhigay 3-2.
Daqiiqadii 90aad meel halis ah ayaa Burnley loo dhigay laad xor ah, waxaa u soo istaagay Brady kaasoo birta u garaacay Chelsea. Chelsea ayaa dadaal weyn ku bixisay afartii daqiiqo ee ciyaarta lagu daray inay ciyaarta barbareyso, laakiin waxa ay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-2 oo ay koxoda Burnely ku badisay.